गर्मी देखिन्छ: सेतोमा सेतो | बेजिया
गर्मीको समयमा सेतो हरदम मुख्य पात्र हुन्छ। यो मौसमको चलनहरूको ध्यान बिना। किनभने जब उच्च तापक्रम बज्दछ, यो उनीहरूको दम गर्न एक उत्तम विकल्प हुन्छ। उज्यालो र ताजा, अरू कुनै र colorले यसलाई लोकप्रियतामा पिटदैन।
बहुमुखी, त्यसैले सेतो रंग छ। हामी यसलाई कुनै अन्य र colorसँग जोड्न सक्दछौं, अपवाद बिना, तर यसलाई सिर्जना गर्न प्रयोग गर्नुहोस् मोनोक्रोम आउटफिटहरू। वास्तवमा, सेतो पोशाकमा सेतो पोशाकले यस बर्षको बर्षमा ठूलो महत्त्व राख्छ। प्रमाणको लागि, हामीले आज चयन गरेका छौं।
यो मोनोक्रोमको साथ हेर्नको लागि कत्तिको सजिलो छ हेर्नको लागि नायकको रूपमा सेतोलाई! विशेष गरी वसन्त-ग्रीष्म lectionsतुमा यस रंगमा कपडा असंख्य हुन्छन्। तपाईंको शैली जस्तोसुकै भए पनि तपाईले लुगा फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन त्यस अनुसार आउटफिटहरू सिर्जना गर्न को लागी।
को सेतो लुगा गर्मी को समयमा तिनीहरू धेरैको लागी एक आवश्यक हो। केवल हाम्रो शैली मा एक पोशाक छनौट गर्नुहोस् र उपयुक्त सामानहरू सम्मिलित गर्नुहोस्। र यी मध्ये रफिया ब्याग र टोपी तिनीहरू सबै भन्दा लोकप्रिय विकल्प बन्न। किनभने राफिया, सेतो जस्तै, अनिवार्य रूपमा गर्मीसँग सम्बन्धित छ।
सूती प्यान्ट सेतो आरामदायक दृश्य बनाउनको लागि अर्को उत्तम विकल्प हो। यदि तपाईं एक ताजा र युवा विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ भने स्ट्र्यापहरूको लागि क्रप टपसँग उनीहरूलाई जोड्नुहोस्। र शर्ट-स्लीव सहारानमा शर्त लगाउँनुहोस् बेल्टको साथ आउटफिटहरू प्राप्त गर्न जुन अफिस वा कुनै कार्यक्रममा जान्छ।
सेतो जीन्स र भित्र बनाइएको छाडा ढाँचाको साथ प्रवाह कपडाs पनि एक राम्रो विकल्प हो। ट्या tank्क माथि संग संयुक्त तपाईं कुनै पनि अवसरको लागि सरल र आदर्श पोशाकहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। ऊँट वा कालो टोनमा एक्सेसरीजसँग पूरा गर्नुहोस् यदि तपाईं अधिक कन्ट्रास्ट खोज्दै हुनुहुन्छ भने,
र हो, त्यहाँ सेतो देखि पूरै गर्मी देखिन्छ को लागी धेरै विकल्पहरु छन्। लिनन शर्ट्स र ब्लेजरहरू उत्कृष्ट टान्डम हुन्। र हामीले बिर्सनु हुँदैन स्ट्रेच बुनाई, कपडा र दुई-टुक्रा सेट जुन शरीरको नजिक छ र थाong्ग सेन्डलको साथ जोड्न यति सजिलो हुन्छ।
के तपाइँ सामान्यतया सेतो मोनोक्रोम आउटफिटको लागि जानुहुन्छ? के तपाई यी गर्मिहरु लाई मन पराउनुहुन्छ?
छविहरू - tineandreaa, सारा क्रिस्टिन, @ फ्री_थेलबेल, @ युलियावेभ, mija_mija, @littleblackboots, बार्टाबाक, fashiioncarpet
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » गर्मी देखिन्छ: सेतो सेतोमा सेता
भोजन तालिकामा प्रेरणा